E7018 eyisisekelo camera yensimbi powder ongaphakeme potassium hydrogen uhlobo electrode. Kokubili i-AC ne-DC kungasetshenziswa futhi kungaba welding yokuma konke. Ingafinyelela ukusebenza kahle kwe-welding, ukuqina okuhle kwe-arc, ukusakaza okuncane, ukususwa okulula kwe-slag nokubukeka okuhle kwe-weld, ukusebenza kahle kokufakwa, futhi kunganciphisa izingqimba zokushisela.
Ukutholwa kwephutha le-X-ray: Ⅰ ileveli
I-Rel / Rp0.2 MPA
I-KV2(J) -30 ℃
IZINQUBO ZOKUSEBENZA NGOKUVAMILE: (AC, DC +)
Ububanzi ku- (mm)
Okwamanje ku- (A)
1. I-electrode kufanele ivunyelwe ngama-350-380 ℃ ngehora elingu-1 ngaphambi kokushisela, yomisa i-electrode lapho uyisebenzisa.
2. Ukugqwala, uwoyela, amanzi nokunye ukungcola kwe-weld kufanele kususwe ngaphambi kokushisela.
3. Kumele usebenzise i-arc welding emfushane, ama-swings akufanele abe makhulu kakhulu, i-welding ewumngcingo efanelekile.
4. Ukuvimbela ukukhiqiza i-arc porosity, ipuleti ye-arc kufanele yamukelwe noma isebenzise indlela yokubuyisela i-arc welding.
Langaphambilini I-Z408 Pure Nickel Cast Iron Electrode AWS ENiFe-CI
Olandelayo: Engagqwali Welding electrode AWS E309L-16, A062）